အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မိမိဦးနှောက် ဘယ်လောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ?
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, February 15, 2010 Monday, February 15, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
19 Responses to “မိမိဦးနှောက် ဘယ်လောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ?”
Thanks so much for it. Take Care ur Health .....
လွယ်ဘူး အမရ။ လုပ်နေရင်းနဲ့ခြောထောက်က ရပ်ရပ်သွားတယ်။ ခြေထောက်ကို သတိထားပြီး လက်ကို ကြည့်ပြီး လှည့်ရင် နဲနဲတော့ ရတယ်။ ကားယားကြီး ဟီးဟီး
ဟဟ.. လူကို အရူးလို့ ထင်အောင်လုပ်နေတာလားဗျ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောကျပြီး ရယ်မိတယ်ဗျာ..
လူတွေက ၀ိုင်းပြီးကြည့်လို့... ဟားဟား
ဟိဟိ.. ဘယ်ဖက် လက်ကို ဘယ်ကနေညာဖက်ရမ်း. (မော်တော်ပီကယ် လက်ပြသလိုမျိုး)
ပြီးရင်.. ညာဖက် လက်ကို အပေါ်ကနေအောက်ကိုလွဲ
ပြီးတော့.. ခေါင်းညိတ့် လိုက် ပြန်မော့လိုက်လုပ်ကြည့်...
အားလုံး direction မလွဲအောင် လုပ်နိုင်ရင် မုန့် ဝယ်ကျွေးမယ်။ :P
ဟဟဟ မလုပ်ကြည့်ပါဘူး ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိတယ် ကိုယ့်ဦးနှောက်က အဲဒီလို အများကြီးကို အလုပ်မလုပ်ဘူး
ဟီဟီ စမ်းမယ်ဆိုပြီး ခြေထောက်ကြွတာ ကြွမရဘူး အထိုင်ကြာလို့ကျဉ်နေတာ ဟီဟီ
ဟဟားးး ချောရေ ဟုတ်တယ် လက်ချောင်းလေးတွေလည်း အဲလိုပဲ လက်နှစ်ဖက်က လက်ချောင်းအချင်းချင်းဆိုင်ထောက်ပြီး တစုံစုံ (ဥပမာ-လက်ခလယ်ချင်း၊ )ခြားပြီး ကွေးလိုက်ကြည့်ရင် ဘေးသက်ဆိုင်ရာလက်ချောင်းစုံပါ လိုက်လုပ်တယ် ဟဟားး ကိုယ်ခဏခဏလုပ်ကြည့်ဖူးတယ်။ ခု နည်းကိုလည်း လုပ်တယ်။ တော်သေးတယ် ကိုယ့်ဘေးနားလူမရှိလို့
စာဖတ်ရင်းတောင် စမ်းကြည့်မိတယ်ခင်ဗျ။ :D
ကျွန်တော်တို့တော့ တစ်ခါတစ်လေ ဂစ်တာတီးရင်း သီချင်ဆို၊ ခြေထောက်က စည်းချက်လိုက်လုပ်ရင်း ကျန်လက်နှစ်ဖက်ကလည်း လုံးဝမနားရ၊ ပါးစပ်ကလည်း သီးချင်းဆိုရနဲ့ အလုပ်တွေကို ရှုပ်နေတာပဲ။
ဘယ်လက်တစ်ဖက်က ကော့ဒ်ကိုင် ညာလက်တစ်ဖက်က ရက်(စ်)သန်တီးခတ်ရတာမျိုး တိုင်ဆိုင်လို့ အမှတ်ရမိတာပြောတာပါ။
ကျနော်က စိတ်ဖြန့်ဝေ တွက်ချက်နည်း နဲ့ လုပ်တယ်လေ။
ညီမလေးလုပ်ကြည့်တယ် ပိုပြီးတောင်ချာချာလည်လည်နေတယ်6ပြီးအောင်မရေးနိုင်ပါဘူး...
စာဖတ်နေရင်းလုပ်ကြည့်တာ ဘေးကလူတွေကြည့်နေတယ် ဂေါက်တယ်လို့ထင်သွားပီးလားမသိလာဘူး ဟိဟိ လုပ်လို့ရပါတယ်..
Ha Ha i like this !!!
ဟဲဟဲ...ဘယ်ရမလိမ့်မလဲ...ကိုယ့်အစ်မလောက်မှ မလည်ရင် ညီမတော်မနေတော့ဘူး...လူတွေကို အရူးလို့ အထင်ခံရအောင် ဟွန်းဟွန်းးးးးးးးးးးးး (တကယ်တော့ ရူးပြီးသား ဟီးးးးးးးးးးးးးးး)
အရမ်းသတိထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျ............ ဟီးဟီး........ ဒါပေမယ့်မရဘူး.......... ကျွန်တော်ကတော့
၂ဖက်လုံး စမ်းကြည့်မိတယ် .. ရတယ်ရှင့် ဘယ်ရောညာရော... ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေ ရုိုးလျက်နဲ့ဆန်းတဲ့ စာလေးတွေ ဖတ်ရတာ လန်းသွားတယ် ကျေးဇူး